Mac App Store တွင် SKYHILL နှင့်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
SKYHILL တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Apocalyptic ကမ်ဘာပျေါတှငျ Roguelike RPG, ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်မကြာသေးမီက Mac App Store ၌စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည် € 14,99။ SKYHILL သည်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည် တတိယကမ္ဘာစစ် Skyhill ဟိုတယ်၌သင်၏ဇိမ်ခံမိုးမျှော်အိမ်၌ပုန်းခိုနေသည့်နေရာတွင်၎င်းသည် bioweapon မှလူသိများသောဘဝ၏သဲလွန်စများကိုယူဆောင်သွားသည်။ သငျသညျအမျိုးမျိုးသောပြallနာများသို့ပြေးပါလိမ့်မယ် Mutant နေရာတိုင်းမှာ သင်၏အရင်းအမြစ်များကုန်သွားပြီ, သင်သည်စားစရာတစ်ခုခုရှာတွေ့ရန်ရှိသည်။
အတွက်, ဒါကြောင့်ဂန္ roguelike ဝတ်စုံသို့ရယူပါ ဂိမ်းတစ်ခုစီသည်ဟိုတယ်၏အထပ်တစ်ရာကိုကျပန်းထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဂန္ထဝင်ပါ Survival ဂိမ်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောအရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်၊ ဟိုတယ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်လူများနှင့်အခန်းများတွင်တွေ့ရသောအရာဝတ္ထုများမှတစ်ဆင့်သိရန်၊ လက်နက်များလုပ်သည် နှင့်တဆင့်ကွဲပြားခြားနားသော Mutant ရင်ဆိုင်ရ လှည့် -based တိုက်ပွဲတွေ။ ဒီဂိမ်းမှာ español ပြီးတော့မင်းကိုချန်ထားတယ် SKYHILL စပိန်ဂိမ်း.
အိပ်မက်ဆိုးသတ္တဝါများ၏ Legion အပေါ်ယူပါ။
ပွင့်လင်းအဆုံးသတ် ... မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးသလား? လာ။ ထွက်ရှာ!
တင်ပါတယ်: 24/10/2015 ။
ဘာသာစကား: စပိန်, ဂျာမန်, ဘရီတွန်, တရုတ်, ကိုးရီးယား, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီ, ဂျပန်, ပိုလနျ, ရုရှား။
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Daedalic ဖျော်ဖြေရေး Gmbh ။
SKYHILL ကို Mac App Store မှတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ပါ အောက်က link ကနေ, သင်ဂိမ်းကိုကြိုက်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Mac App Store တွင် SKYHILL နှင့်တတိယကမ္ဘာစစ်
Apple က support application တစ်ခုကိုတီထွင်နေတယ်